Atlas Copcoconsolidates Chinese Ngwuputa arụmọrụ - China Tianjin Longtop Mining
The ụlọ ọrụ kwuru na aga ga-amụba arụmọrụ ma na-ewusi ụlọ ọrụ maka ọdịnihu.
Atlas Copco ga-emechi ya eweta na Shenyang, nke manufactures tumadi n'aka-ẹkenịmde rock u maka Ngwuputa na-ewu, na-akwaga ebe arụmọrụ osisi na Zhangjiakou. Na Shenyang, banyere 225 ndị ​​mmadụ ga-emetụta.
Na Zhangjiakou, Atlas Copco ugbu a na-arụpụta ala-na-onu ngwá eji akuakuzinwo blastholes, mmiri n'olulu mmiri ma geothermal ume ngwa. Na nke a ọnọdụ, banyere 45 ọrụ a ga-atụkwasịkwara na investments mere na a owuwu mgbasa na ọhụrụ ígwè.
"Anyị nwere oké ngwaahịa Pọtụfoliyo na China, ma na-adịghị ike ina na Ngwuputa ahịa anyị ga-hụ na anyị na-eji anyị ike kasị oru oma ụzọ," kwuru Johan Halling, president maka Mining na Rock, e gwupụtara Usoro azụmahịa ebe.
"Consolidating arụmọrụ ga-enyere anyị kwụsie ike maka ọdịnihu. Anyị ga na-akwado ndị na-emetụta ọrụ na nke a siri ike ọnọdụ ahụ. "
Ma arụmọrụ bụ isi na-eje ozi na anụ ụlọ Chinese ahịa.